တရုတ် USB ပျံ့, USB မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့, USB ရေနံပျံ့ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း
Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:61% - 70% Cert:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report ဖေါ်ပြချက်:usb ပျံ့,usb မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့,usb ရေနံပျံ့,usb အနံ့ပျံ့,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > USB မှပျံ့
USB မှပျံ့ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, usb ပျံ့, usb မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, usb ရေနံပျံ့ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ Usb diffuser ရနံ့ကုထုံး Usb Wood Humidifier
Ultrasonic ရနံ့ကုထုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ Usb ကို Mini Diffuser
ရေ usb ဘက်ထရီလည်ပတ်မှုရေနံ diffuser မရှိပါ
USB Cable ဘက်ထရီစွမ်းအင်သုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပျံ့နှံ့မှု
Ultrasonic ရနံ့ကုထုံးပန်ကာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ Usb diffuser
ကားအတွက် Walmart Travel မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့
Usb Diffuser Aroma Oil မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော Battery ကိုအသုံးပြုထားသည်
စျေးပေါစျေးနှုန်းချိုသာသော Living Living Usb Manual နှင့်အတူ
အိတ်ဆောင် Young Living Usb diffuser မလေးရှားစင်္ကာပူ
Ultrasonic မြူ Usb ပျံ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံလူငယ်လူနေမှု
Target Walmart Amazon မှလူကြိုက်များသောထုတ်ကုန် Usb diffuser
Usb Humidifier ဖိလစ်ပိုင်ပါကစ္စတန်စျေးပေါစျေးနှုန်း
သေးငယ်တဲ့ Usb Travel Diffuser Essential Oil ကိုအသုံးပြုထားသည်
ultrasonic သစ်သား 50 ml ကို usb ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရနံ့ပျံ့
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီများအတွက် Desk Computer ကို Usb ပျံ့
Usb Car 50ml နူးညံ့သိမ်မွေ့သော Mini Aroma Diffuser
Usb Nebulizer ရေမရှိသောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအနံ့ဆိုး
Wood Grain Essential Oil Mini Usb Mist Diffuser ကောင်းသောသန့်စင်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ မွှေးကြိုင်သောပျံ့နှံ့သူသည်လေထုကိုသန့်ရှင်းစေရန်သစ်တောများနှင့်ရေတံခွန်များကဲ့သို့သောသဘာဝတွင်တည်ရှိသည့်တူညီသောအနုတ်လက္ခဏာအိုင်းယွန်းအမြောက်အများကိုထုတ်လုပ်ပြီးသင့်အားအလွယ်တကူသန့်ရှင်းသောအသက်တာနှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀...
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ Usb diffuser ရနံ့ကုထုံး Usb Wood Humidifier ရုံး၌အပန်းဖြေရန်၊ အိမ်၌အပန်းဖြေရန်၊ အိမ်၌အပန်းဖြေရန်အတွက်အသုံးပြုရန်ဖြစ်စေ၊ ရုံး၌အလုပ်လုပ်နေသောအနံ့ပျံ့နှံ့မှုမှတစ်ဆင့်မွှေးပျံ့သောပျံ့နှံ့ရန်အလွန်သင့်လျော်သည်။ ထို့အပြင်မွှေးပျံ့ပျံ့သောအရွယ်အစားနှင့်အမြန်သက်ရောက်မှု၏အားသာချက်များကိုရှိပါတယ်။...
Ultrasonic ရနံ့ကုထုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ Usb ကို Mini Diffuser မွှေးကြိုင်သောပျံ့နှံ့သူများသည်ကျွန်ုပ်တို့ပတ် ၀ န်းကျင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအထူးမွှေးကြိုင်သောအရာဖြင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကိုဖောက်သည်များ၏နှစ်သက်မှုတိုးတက်စေရန်အတွက်ဟိုတယ်များနှင့်အခြားအများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာများတွင်အသုံးပြုသည်။...
အရည်အသွေးမြင့်သစ်သားအစေ့အနံ့ရေနံပျံ့ Usb ၎င်းသည်အနံ့စိုထိုင်းသောအပင်အဖြစ်၎င်းသည်အသွင်အပြင်မြင့်မားပြီးရေမြောင်းများရှိပြီးလေကိုစိုပြည်စေပြီးအရေပြားကိုရေဓာတ်ဖြည့်ပေးနိုင်သည်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေတွင်ကျသောကြောင့်အမွှေးအကြိုင်သည်လျင်မြန်စွာထွက်လာပြီးသင်သဘာဝရနံ့ကိုချက်ချင်းခံစားနိုင်သည်။ မြူထွက်ပေါက်များအထက်သို့မျက်နှာမူ။...
Waterless အနံ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ဘက်ထရီအသုံးပြုသည် Nebuliser သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့နှံ့မှုကိုကုထုံးဖြင့်အသုံးပြုရန်အတွက်အကောင်းဆုံးစက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများကိုမိုက်ခရိုချပ်များအဖြစ်သို့ဖြိုခွဲရန်အအေးမိသည့် nebulising နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။...
ရေ usb ဘက်ထရီလည်ပတ်မှုရေနံ diffuser မရှိပါ ၎င်းသည်ရေ မရှိ၍ သယ်ဆောင်နိုင်သော Aromatherapy Nebulizer ဖြစ်ပြီးသင်နှစ်သက်သောမည်သည့်နေရာမဆိုလေထုကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီ၏အရနံ့ဖြည့်ပေးနိုင်သည်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီဖြန့်စက်ကိုသင့်အိမ်၌ (living ည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်း၊ မီးဖိုချောင်၊ ရေချိုးခန်း)၊ ရုံးခန်း (စားပွဲ၊...
USB Cable ဘက်ထရီစွမ်းအင်သုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပျံ့နှံ့မှု Nebulizing Diffusor ဆိုသည်မှာအငွေ့ပျံမှုကိုအောင်မြင်ရန် nebulization ဖြစ်စဉ်ကိုအသုံးပြုသောပျံ့နှံ့သောအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများကိုအလွန်သေးငယ်သောအမှုန်များအဖြစ်သို့ပြိုကွဲစေပြီးအမြင့်ဆုံးအလျင်၊...
Usb Powered Laptop Computer Mini Aroma Diffuser မိသားစုများစွာသည်ကားများပိုမိုများပြားလာသောကြောင့်ယာဉ်များသည်နေ့စဉ်ခရီးသွားခြင်းနှင့်ကစားခြင်းအတွက်တာ ၀ န်ရှိသည်။ ဆယ်နှစ်ကျော်မောင်းနှင်နေတဲ့ဝါရင့်ယာဉ်မောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်မမှာလူတိုင်းကိုမျှဝေဖို့အတွေ့အကြုံအချို့ရှိနေဆဲပါ။ ဥပမာကားအသစ်တစ်ခုကို ၀...
Ultrasonic ရနံ့ကုထုံးပန်ကာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ Usb diffuser ပုဂ္ဂလိကကားများ၏လူကြိုက်များမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကားများနှင့်အချိန်ပိုကုန်သည်။ ကားများသည်ပုဂ္ဂလိကအာကာသ၏အမှတ်အသားဖြစ်လာသည်။ ၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုသည့်အခါသင်တစ် ဦး တည်းသာပိုင်ဆိုင်သည့်အခိုက်အတန့်ဖြစ်သည်။ ဒီအခိုက်အတန့်မှာအချိန်တွေအများကြီးကုန်လိမ့်မယ်။...
ကားအတွက် Walmart Travel မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ အနံ့အရသာကလူတွေကိုလန်းဆန်းစေတယ်၊ ​​ငါတို့အားလုံးသိတယ်။ သို့သော်သင်၏ကားထဲသို့ဝင်သောအခါသင်သည်ကားအတွင်းရှိအနံ့အမျိုးမျိုးကြောင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ဖူးပါသလား။ ဤအနံ့များသည်သင်နှင့်သင်၏မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်မပြေမှုနှင့်ပျို့ချင်စေမှုဖြစ်စေသလား။...
Usb Diffuser Aroma Oil မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော Battery ကိုအသုံးပြုထားသည် အလွန်လက်တွေ့ကျသောကားအပိုပစ္စည်းများ၊ သင့်ကားကိုကောင်းမွန်သောဝန်းကျင်ပေးပါ ကားအသင်း၏စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုနှင့်အတူကားနောက်ကျသည့်ကားအတွင်းရှိအမျိုးမျိုးသောထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများအမြဲတမ်းမွမ်းမံလျက်ရှိသည်။ မင်းကားကအရမ်းတင်းကျပ်လွန်းတယ်လို့ထင်သလား။...
စျေးပေါစျေးနှုန်းချိုသာသော Living Living Usb Manual နှင့်အတူ ရိုးသားဖြောင့်မတ်သောနှလုံးသားရှိသည့်ရနံ့ကုထုံးမြူစက်၊ သက်သောင့်သက်သာဘဝ။ လေပြေသည်မှုတ်သွင်း။ အာရုံကြောများကိုအိပ်မက်လိုအေးဆေးငြိမ်သက်နေသောအေးဆေးအေးဆေးသည့်ဝန်းကျင်ကိုအေးဆေးငြိမ်သက်သွားစေသည်။ ပျော့ပျောင်းသောအခိုးအငွေ့သည်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်။...
အိတ်ဆောင် Young Living Usb diffuser မလေးရှားစင်္ကာပူ နေ့၏နှေးကွေးသောအချိန်၊ ည၏နှစ်သိမ့်မှု။ မင်းငြိမ်းချမ်းရေးရချင်ရင်နေရာတိုင်းမှာသက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ထိုင်ခုံကုလားထိုင်ရှိတယ်။ အမွှေးနံ့သာပျံသန်းသောလေထဲတွင်လှည့်လည်သွားလာရခြင်း၊ မြူမှုန်သောလေထု၊ လေကိုစိုစွတ်စေပြီးခြောက်သွေ့သောတင်းကျပ်သည့်အသားအရေကိုမောင်းထုတ်နိုင်သည်။...
Ultrasonic မြူ Usb ပျံ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံလူငယ်လူနေမှု Fine atomization နှင့်စိုထိုင်းဆ။ Ultrasonic ဒီဇိုင်းသည်လူ၏အရေပြားကိုစုပ်ယူနိုင်မှုအားပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်အတွက်ရေကောင်းရေသန့်ကိုထိရောက်စွာထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ဆိတ်ငြိမ်သောဒီဇိုင်း။ အရည်အသွေးသည်ဘဝကိုဆုံးဖြတ်သည်၊...
Target Walmart Amazon မှလူကြိုက်များသောထုတ်ကုန် Usb diffuser Ultrasonic မှုံသောအခိုးအငွေ့၊ မွှေးပြီးစိုစွတ်စေသော၊ ဒေါင်လိုက်မြူထွက်ပေါက်ဒီဇိုင်း၊ အခိုးအငွေ့သည်လေထဲတွင်အပြည့်ပါ ၀ င်သည်။ သင်အကြိုက်ဆုံးရနံ့ကုထုံးကိုစွန့ ်၍ အနံ့သည်သင့်ကိုပျံ့နှံ့စေပါလိမ့်မည်။ ဘဝရဲ့လှပမှုလေးကရိုးရှင်းပါတယ်။ ၎င်းသည် moisturizer...
Usb Humidifier ဖိလစ်ပိုင်ပါကစ္စတန်စျေးပေါစျေးနှုန်း အနည်းငယ်ပူသောလက်ချောင်းထိပ်များ၊ နီရဲသောမျက်နှာ၊ သူ၏ရှေ့မှောက်၌အနည်းငယ်မြူဆိုင်းနေသော်လည်းအစပိုင်း၌မရှင်းလင်းသေးပါ။ လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်သည့်နေရာမှတိတ်ဆိတ်စွာ၊ အံ့သြဖွယ်၊ ရုတ်တရက်သမ္မာသတိရှိသော်လည်းခုခံတွန်းလှန်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ အအေးမိ။...
သေးငယ်တဲ့ Usb Travel Diffuser Essential Oil ကိုအသုံးပြုထားသည် လှပသောမျက်နှာကိုချန် ထား၍ အသွင်အပြင်သည်ဖက်ရှင်ကျသည်။ လှပပြီးဖက်ရှင်ကျတဲ့ဒီဇိုင်းကသူကိုချဉ်းကပ်စေပြီးသင်၏နေရာကိုစတိုင်လ်ထိတွေ့စေခြင်း၊ အနုပညာနှင့်နည်းပညာများကိုလက်ရာကဲ့သို့ပေါင်းစပ်။ ဒီဇိုင်းဖန်တီးသူ၏ဖန်တီးမှုကိုပြသည်။...
ultrasonic သစ်သား 50 ml ကို usb ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရနံ့ပျံ့ သယ်ဆောင်ရလွယ်သောကား humidifier, သန့်စင်ခြင်းနှင့်စိုစွတ်ခြင်းတို့သည်သင်နှင့်အတူပါ ၀ င်လိမ့်မည်။ စိုထိုင်းဆနှင့်အစိုဓာတ်ထိန်းပေးခြင်းသည်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပတ်ဝန်းကျင်လိုအပ်ချက်များကိုကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲဖြည့်ဆည်းပေးသည်။...
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီများအတွက် Desk Computer ကို Usb ပျံ့ မွှေးကြိုင်သောပူးတွဲပါ ၀ င်မှုသည်အိမ်တွင်ရှိခြင်း၊ ရနံ့ကုထုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများနှင့်အတူတူပါပဲ၊ ကားတွင်ပျံ့နှံ့နေသည့်အနံ့၊ မောင်းနှင်မှုအားကုန်ခန်းသွားခြင်းကိုသက်သာစေသည်။ အိမ်မှာအဆင်ပြေ။ တန်ဖိုးကြီးသစ်သားစပါးအသွင်အပြင်, လှပသောနှင့်အကြမ်းခံ။...
Usb Car 50ml နူးညံ့သိမ်မွေ့သော Mini Aroma Diffuser အိပ်ခန်းကိုရေမွှေးနှင့်စိုစွတ်အောင်လုပ်ပါ၊ ည့်ခန်းသည်စိုထိုင်းဆဖြစ်ပြီးအသက်ရှူခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ ရုံးကသက်တောင့်သက်သာရှိပြီးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှု၊ ကားရဲ့ရနံ့ကလန်းဆန်းစေတယ် (Dituo ထုတ်ကုန်များ: Ultrasonic ပျံ့နှံ့, သစ်သားအစေ့ပျံ့, စမတ်ပျံ့နှံ့, ဝါးပျံ့, ပလပ်စတစ်ပျံ့,...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - ၉၀ * ၉၀ * ၁၀၀ မီလီမီတာ; မာစတာပုံး: 48 * 38.5 * 32cm / 60pcs
Usb Nebulizer ရေမရှိသောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအနံ့ဆိုး Model No.: DT-1501 Size: 85x85x65.5mm Material: PP ABS Weight: 115g Power: 1W Power Source: DC 5V 1A Battery: Yes Led:
တရုတ်နိုင်ငံ USB မှပျံ့ ပေးသွင်း
အေးမြသောအခိုးအငွေ့ / မရှိ, အပူ / အပူလောင်၏အဘယ်သူမျှမစွန့်စားမှုပါဝင်ပတ်သက်နေ
2 မှ3နာရီကြာပြေး
သင်ဤ usb မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့နှင့်အတူရှူရှိုက်လေသန့်ရှင်းစေ
အဆင်ပြေ usb အနံ့ပျံ့သင့်ကုမ္ပဏီအမည်နှင့်လိုဂို၏စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်
DITUO Solutions USB ရေနံပျံ့နေတဲ့ USB ကြိုးနှင့်သင်၏လက်ပ်တော့သို့ပလပ်ထိုးပေးရမယ့် usb ပျံ့ဖန်တီးဖို့ခေတ်သစ်သိပ္ပံနည်းကျဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်အတူရနံ့ကုထုံမှီဝဲ။ ဤသည်မိုဘိုင်းပျံ့ PP ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအထိ3နာရီများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများ diffuses ။ ၎င်းသည် Ultra-ဒဏ်ငွေအခိုးအငွေ့ကိုဖန်တီးရန် High-အကြိမ်ရေ ultrasonic လျှပ်စစ်တုန်ခါအသုံးချ။ ဒါကပျံ့နှံ့နည်းလမ်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံသမာဓိရှိနှင့်ဘက်စုံဂုဏ်သတ္တိများကိုသင်အသုံးပြုနိုင်အခါတိုင်းထိန်းသိမ်းထားသည့်အပူ, အသုံးချမထားဘူး။
Usb Air ပျံ့